Iyagu dan kama lihi annaga laakiin si nabdoon ayaanu nooga ilaalinaa - Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac
Iyagu dan kama laha laakiin annaga ayaa nabdoon
Home/updates/Iyagu dan kama laha laakiin annaga ayaa nabdoon
Waxay dhamaatay usbuuc ilaa Duufaanta Florence ay ku dhufatay North Carolina, oo daadadkuna ay sii kacayaan. Iyada oo ay korantadu mar horeba kusoo noqonayso xaafadaha qaar kuwa awooda leh, kuwa aanu ka shaqayno ayaanay xataa haysan biyo la cabbo oo nadiif ah. Meelo badan oo miyiga ah, ayaa shaqaalaha soogalootiga ah ee beeraha ka soo hayaamay waxay ku hareen xeryo, oo ay hareereeyeen wabiyaal dhinac kasta ah, halka shaqaalayaashoodu ay qaxeen. Dhanka kale, fursadayaasha musiibada ee Xuduudaha Mareykanka xuduuda ayaa ka wada isbaarooyin sidan oo kale ah gudaha Kinston, North Carolina. Horaantii xagaagan, maamulka Trump ku dhawaad ​​$ 10 milyan oo doolar ka fogeysay FEMA si loogu maalgeliyo xarig-soo-galootiga ICE iyo masaafurinta.
Lumberton, dadaalka gurmadka abaareed ee uu hogaaminayo dadka asaliga ah ayaa isku dhafan deegaanadan miyiga ah, dadka asaliga ah, Madowga iyo Latinx oo xaafado badan ay wali biyo galeen isla markaana dadku wali ku xayiran yihiin baahiyaha aasaasiga ah. Dad badan oo ka mid ah meelaha daadadka ku fatahay ayaa lagu qasbay inay maalin walba ku wareegaan biyo wasakhaysan qashinka beeraha warshadaha iyo dambaska dhuxusha.
Magaalada Wilmingtonna xaafado badan ayaa la tacaalaya saameynta caafimaad ee saqafyada dumay iyo saqafyada dumay. Dadku mar horeba waxay dareemayaan inay bukoodaan caaryada xirxiran, dahaar la'aanta, iyo asbestos guryaha duugga ah. Magaalada hoose ee Wilmington ayaa hadda daad qaadaysa, waxaana la filayaa in biyuhu ay kor uga soo kacaan Wabiga Cape Cabsi. Waxaa jira shaqo badan oo ay tahay in laga qabto iyadoo lala kaashanayo dadka waawayn ee ku nool Wilmington, Lumberton, iyo Bariga Waqooyiga Carolina oo dhan.
Waxaan aragnay guryo leh calaamado ku saabsan toogashada boobayaasha, iyo sidoo kale dad hubeysan oo dejinaya xirmooyinka xaafadaha. Dhamaan halka bakhaarada sanduuqa ay fadhiistaan ​​waxaa ka buuxa cunno aad u badan, biyo, alaabada ilmaha, iyo waxyaabo aad u badan. Raasamaalnimada ayaa naga dhigeysa inaan rumeysanno yaraanta, halka shelfyadu si caadi ah u fadhiistaan ​​si buuxda, oo ay sugayaan in laga iibiyo macaash kuwa wax haysta. Xaafadaha aan ka shaqeyneyno waxaan ku soo qaadaneynaa Raasumaal Racialized Capitalism, Xenophobic Nationalism, iyo Settler Colonialism aragti buuxa. Waa tusaale cad oo tusaale u ah kala-dambiyada iyo dulmiga aan u dagaalamay iyo baahida loo qabo is-dhexgal.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan, ee Horry County, South Carolina, laba haween ah oo la soo maray xaalado maskaxeed oo la beddelay, Wendy Newton iyo Nicolette Green, ayaa ku dhintay daadadka kadib markii ay afduubteen sharci xoojin. Saraakiisha naftooda badbaadiyeen oo ku fadhiistay gaariga dushiisa halka Wendy iyo Nicolette gudaha ku hareen. Iyo South Carolina, saraakiisha diiday in laga saaro maxaabiista taas bedelkeedna ay ka dhigto inay ka shaqeeyaan samaynta jawaanno ciid ah si loogu diyaariyo imaatinka duufaanta.
Oo cadaabtaan, kacdoon madax-bannaan, awood-baahin baahsan ayaa mar kale soo socota, iyagoo ku riyoonaya gacmahooda - dhagaysi, jacayl, dagaal, iyo ka faa'iideysiga xirfadahooda, shabakadaha, iyo qalbi deg deg u garaacaya si ay u helaan saanadda Dadka asaliga ah, Madowga, bulshooyinka soogalootiga ah ee soogalootiga ah. , dadka ay la kulmaan hoy la’aan, iyo kuwa kale oo taariikh ahaan dayacay oo iska indho tiray warshadaha gobolka iyo macaashka aan faa'ido doonka ahayn, garab istaaga garab istaaga, u shaqeynta #JustRecovery, oo ku celcelinaya in rajadeenna mustaqbal rajo leh ay ku nastaan, hadda iyo had iyo goorba, midba midka kale gacmaha.
Awoodaha baahinta awoodda by Difaaca madaxbannaan ee buluugga ah, Isbahaysiga Diinta Caddaaladda Caddaaladda, Mutboro Aid Carrboro, NC Solidarity Network, Wadajirida Wada-tashiga Biyo-mareenka, Wadajirka Caafimaadka ee Appalachian, Isku Duwaha Caafimaadka Magaalada Magaalada, Barnaamijka Soo Celinta Bulshada, Durham, NC Mutual Aid Musiibo Distro, Samatabbixinta Ilaha Crowd, Howlgalka Airdrop, Iyo Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha, waxay u soo baxeen sidii qurux quruxsan oo xamaasad leh oo gurmadka dadka wax u yeelay. Ururadan iyo kuwa kale oo badan, ururro iskood u madaxbannaan, iyo kooxo xiriir wadaag ah ayaa si adag uga shaqeeyey sidii ay u diyaarin lahaayeen goobo loogu talagalay soo kabashada bulshada oo ay taageeraan jiritaanka dadka iyo go'aan-gaarista. Si loo bixiyo shay qaabeyn ah, hal maalin oo keliya, dadka soo kiciyay waxay abaabulaan sahayda 55,148 lbs ee sahayda, loogu talagalay 107 duulimaadyo, oo ay la socdaan duuliyeyaasha 66, ee garoonka diyaaradaha 10 si ay u helaan sahayda loo baahan yahay ee ku dhufan kara, bulshooyinka daadadku hareereeyeen.
Markay sahaydu soo galaan, kuma fadhiistaan ​​bakhaarro, laakiin waxaa loo qaybiyaa dadka sida ugu dhakhsaha badan, si loo xoojiyo sharafta dadka iyadoo lagu saleynayo midnimo aan ahayn tabaruc.
Hadana halkan kuma bilaabmin. Kooxo badan oo maxalli ah ayaa la dagaallamayey aafooyinka gumaysiga, aabbenimada, iyo maal-gelinta sanado kahor masiibada muuqata ee Hurricane Florence. Kulligood waxay mudan yihiin taageero iyo qirasho. Khaliij kale ayaa macquul ah Isbahaysi lala yeesho North Carolina Cimilada Cimilada Cimilada iyo kooxo kale waxay abuureen meel lagu nadiifiyo macluumaadka Hurricane Florence. halkan xiriiriyeyaal ay la leeyihiin qaar ka mid ah ururrada safka hore. Guri kale oo xog-ogaal ah waxaa dejiyay asxaabteena Hoos ayey u dhacday.
Shaqaalahayaga guur guura waxay si toos ah gawaarida sahayda sahayda ah u diraan bulshooyinka u baahan. Shaqaalaheenna kale waxay ku jiraan bulshada dhexdeeda iyagoo xiraya saqafyada dadka, nadiifinta qashinka, qaybinta sahayda yareynta waxyeelada, sii wadidda baaritaanka hubinta, ka qeybqaadashada goobidda iyo samata bixinta, dejinta saldhigyo ay bulshada ku amreyso taleefanka gacanta, iyo sidoo kale inbadan, iyo inta ay qaadaneyso cuntada diiran. , biyo qabow, iyo xoojinta iyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxaysa xubnaha bulshada ee saameynta ku yeeshay laba toddobaad ka hor. Horeba dad waawayn oo xaafadaha aanu ka hawl galnay ayaanu inta badan la wareegnay socodsiinta duruufaha, iyadoo aan ugu horrayn ka caawinno saadka saadka.
Waxaan abuurnay liistada liisaska ee Amazon si loogu diro sahayda si toos ah jaaliyadaha saameynaya sidoo kale liistada sii kordheysa ee la xiriirta madaxbanaanida Florence iyo maalgelinta aruurinta labadaba halkan ayaa laga heli karaa [hoos u riix].
Waxaan aaminsanahay dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq oo kici doona oo ka sarreyn doona fatahaadaha daadadku ku hanjabayaan inay dhammaanteen ina wada qarqiyaan. Maalmaha xasilloon waxaan dhisnaa muuqaalka riyooyinkeenna waxaanna ku beernaa abuur. Iyo kuwa dabaylaha ah, roobabka, dabaylaha, iyo wixii ka dambeeya, waxaan maqli karnaa in dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa uu si tartiib tartiib ah ugu soo noqonayo nolosha.
2018-09-24T16:49:59-04:00Sebtembar 23rd, 2018|updates|